I-inshorensi Yokuzonwabisa | uAirbnb
Xa kuvela imeko engaqhelekanga yokwenzakala komntu okanye ukonakala kwento yakhe ebudeni bento enokonwatyelwa ekhuselwe yi-inshorensi, umbuki zindwendwe unokubhatalwa ukuya kufikelela kwi$1 000 000 yeedola zaseMerika.
Iyafumaneka kubabuki zindwendwe bezinto ezinokonwatyelwa abaninzi
Ikhusela ababuki zindwendwe ukususela ekuqaleni ukuya kutsho ekugqibeleni
Le nkqubo isebenza kubabuki zindwendwe bezinto ezinokonwatyelwa, ngaphandle kwemimandla yaseTshayina naseJapan. Ayisebenzi kubabuki zindwendwe beendawo zokuhlala.
I-inshorensi Yokuzonwabisa inokukhusela:
Imbopheleleko yakho ngokwasemthethweni yokwenzakala kweendwendwe okanye kwabanye abantu -Imbopheleleko yakho ngokwasemthethweni yomonakalo wezinto zeendwendwe okanye zabanye abantu
I-inshorensi Yokuzonwabisa ayikukhuseli oku:
Ukwenzakala okanye umonakalo obangelwe yinto eyenziwe ngabom (kungekhona ngengozi)
Umonakalo, ukulahleka okanye ukubiwa kwezinto zombuki zindwendwe
Izinto ezinokonwatyelwa ezenziwa ngenqwelo-moya okanye iintlobo ezithile zezinto ezenziwayo ezinobungozi (njengokutsiba usuka phezulu okanye ukutyibilika kumkhence usuku phezulu)
Ixesha lokulungiselela into enokonwatyelwa
I-inshorensi Yokuzonwabisa inokukhusela ababuki zindwendwe ebudeni bento enokonwatyelwa naxa belungiselela indawo eza kwenzelwa kuyo into enokonwatyelwa, ngaphambi kokuba iqale nasemva kokuba iphelile, ngokwemimiselo, imiqathango neemeko ezingabhatalelwayo zepolisi.
Ukukhuselwa kwabo bancedisayo
Abantu abancedisayo ekubukeni iindwendwe abanikela ngeenkonzo ezinento yokwenza nento enokonwatyelwa nabo basenokukhuselwa Yi-inshorensi Yokuzonwabisa, phantsi kwimimiselo, imiqathango neemeko ezingabhatalelwayo zepolisi.
Umbuki zindwendwe okanye omnye umntu ugcwalisa aze afake Ifomu Yenkqubo Yokufaka Ibango Kwi-inshorensi.
3. Ibango liyaphandwa ngumntu omiselwe ukuphanda amabango
I-inshorensi Yokuzonwabisa isebenza phantsi kweemeko ezithile, kukho imiqathango neemeko ezingabhatalelwayo. Ukuze ufunde ngakumbi, dawunlowuda ushwankathelo lwenkqubo oluneenkcukacha ezingakumbi.
Ngaba kukho into ekufuneka ndiyenze ukuze ndikhuselwe phantsi kweInshorensi Yokuzonwabisa?
Hayi. Xa usiba ngumbuki zindwendwe kwinto enokonwatyelwa uze uvumelane Nemimiselo Yenkonzo ka-Airbnb, uvuma nokukhuselwa yi-Inshorensi Yokuzonwabisa kwizinto ezenzeka ebudeni bezinto ezinokonwatyelwa kuAirbnb. Qaphela ukuba i-Inshorensi Yokuzonwabisa isebenza phantsi kwemimiselo, imiqathango neemeko ezingabhatalelwayo zepolisi.
Ukuba ungathanda ukuphuma kwinkqubo yeInshorensi Yokuzonwabisa, kufuneka wenze ezi zinto zilandelayo:
Sithumelele i-imeyile ngedilesi yeimeyile ekwiakhawunti yakho yombuki zindwendwe wento enokonwatyelwa
Faka igama lakho nefani kunye nenombolo yefowuni ekwiakhawunti yakho yombuki zindwendwe wento enokonwatyelwa
Faka isihloko sento yakho enokonwatyelwa njengokuba sinjalo
Ngaba I-inshorensi Yokuzonwabisa iyasebenza kwizinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi?
Ababuki zindwendwe bezinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi banokukhuselwa yi-Inshorensi Yokuzonwabisa kwimeko engaqhelekanga yokuba undwendwe lonzakale okanye konakale into yalo ebudeni benye yezi zinto zenziwa ngevidiyo ekuthathwa inxaxheba kuzo abe umbuki zindwendwe enembopheleleko ngokomthetho. I-inshorensi Yokuzonwabisa ayimkhuseli umbuki zindwendwe kwizinto ezingumngcipheko we-intanethi ezifana nokuthethwa kakubi okanye ukubiwa kwenkcazelo ekwi-intanethi okanye ukophulwa kwamalungelo omntu okulawula amacebo akhe.
Ukuze ufunde ngakumbi ngokubuka iindwendwe kwizinto ezinokonwatyelwa, yiya Kwiziko Loncedo.
Ukulungele ukuqalisa ukufaka into yakho enokonwatyelwa?
I-inshorensi yokuzikhusela yababuki zindwendwe beendawo efikelela kwi$1 000 000 yeedola zaseMerika.